I-Surfrider 11 - Ipharadesi Lasebhishi - I-Airbnb
I-Surfrider 11 - Ipharadesi Lasebhishi
315 okushiwo abanye
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Kristin
Qala iholide lakho ngesiphuzo sokuphumula kuvulandi obheke indawo yokulondoloza izihlahla. Uma usukulungele, thatha uhambo lwesibili lwemizuzwana engu-60 ngaphesheya komgwaqo futhi usebhishi lase-Mollymook, elinye lamabhishi amahle kakhulu e-Australia.
4.65 out of 5 stars from 315 reviews
4.65 · 315 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-315
I-Mollymook ingamahora angu-3 eningizimu ye-Sydney namahora angu-2 ukusuka e-Canberra. I-Mollymook iyindawo enhle engasolwandle ephakathi kwe-Ulladulla ne-Milton engokomlando.
Le ndlu isendaweni eseningizimu ye-Mollymook Beach e-Mitylvania Parade. Ekugcineni ngakunye, ibhishi livikelekile futhi lifanele izingane ezincane. Iningizimu yebhishi igcinwe unyaka wonke futhi kunendawo enhle enamachibi edwala ekutshuzeni okuphansi. Inyakatho igciniwe ngezinkathi ezimatasa. Ibhishi lase-Narrawallee liwukuhamba okufushane ngemoto ukuya ebhishi elihle ngokulinganayo elinendlu engaphakathi. Ibhishi lase-Narrawallee ligadwe phakathi namaHolide e-Xmas.
Asihlali endlini, kodwa sikushayela ucingo uma kunesidingo.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-10579